Author: Mezticage Zurg
Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha. Gadaa jaarsummaa ykn manguddummaati. Gadaan isaanii dhumee lamaanuu Birmajiif bakka gaddhiisan. Gujii keessatti — kuusa jedhamu.
Achi keessaa bahee gosoota hafniifiis Qaalluu tahu. Waraanni Adaal Mabraq harka Oromootti baqe, inniniis lbaqatee laga Awaash cehe. Ilmaan jaarsaafii ilmaan Kormaa d. Ilmi quxxusuun dabranii lafa haaraya barbaadu. Kana keessatti hooda, safuu, beekumssa, qaroomaafi yaadumsi qooda guddaa kennu.
Mootummooleen habashaa darban Oromoo cabsuuf jecha meeshaalee waraanaa, ogeessotaafi loltoota waliin biyyoota Awurooppaa adda addaa irraa kadhachuun Oromoo irratti duulaa akka turan seenaan hinhaalle. Lammiin kun lameen, yeroo dheeraaf waliin jiraataa turanii booda foxxqanii akka qubataniidha. Kanaaf, sadarkaadhaan bakka itti garaagarummaan jiru tokko kana taha.
Kanaaf amantiifi aadaan tokkummaa akka qaban ifaadha. Biyya keessa sossohanii ummataan walbaruu, akkanatti aangoo polotikaaf ofqopheessu jechuudha. Dhumarratti aadaan, polotikaafi amantiin walitti hidhatoo tahuun ifaadha. Lammiin Somaalee itti aanee sossohee waan gara bahaafi kibbaa qubate fakkaata.
Abdaarrii-ayyaana dachii midhaan baasisuuti Qaallonniis sirna ayyaana amantii kanarratti ummata gorsu, jajjebeessu. Akkaataaan itti dhalli namaa naannoo isaa hubatee jijjiiru, daawwannoo dinagdeefi polotikaa kan tahe kun aadaa jedhama.
Harmuf Awaash cehee Affaarootafi Habashootatti duuluu jalqabe. Carraan aangoo polotikaa keessaa qooda qabaachuufi dhiisuun isaa yeroo itti dhalaterratti hundeeyfama.
Oromoonni gootummaan lolanii gaafa 12ffaa waraana Habashaa dahannoo isaa keessatti itti seenaanii hedduu irraa fixan. Gadaa isaa faarsa, kabaja. Isaan keeessaa, ayyaanootni beekamoon kabajamuun waan jiraatani.
Dargaggooma Yeroo kana kan itti dargaggooman waan taheef, sadarkaa Gadaa kanaas bakka gargaraatti maqaa garagaraa waan qabuuf sadarkaa kanaan, Dargaggooma jedhama. Oromoonni karaa Qaalluu Waaqaan walqunnamuu malee, akkaataa biraas niqabu.
Eega Gadaan kitaaa, akka himamsa manguddootti Booranatti waggaa taha jechuudha. Hawaasa Oromoo bara Gadaa keessaa yoo fudhannee akkaataa jiruufii jireenya Oromoo, akkaataa qoodama dalagaa, hariiroo ummanni Oromoo hawaasa keessatti waliinqabau, sirna Gadaa keessatti qaama tokko.
Kanaf, hiriyyummaan karaa hawaassfi polotikaa Oromootaa walitti hidhuudha. Ummata ollaa wajjiin waldhabbiin yoo argamees, gumaabaasuufiis tahee, falmu, lola waan ilaaluufi dantaa lammii saanaa guutummatti manguddootaan ilaalamee murtii godhata.
Ilmaan kormaa gaafa dhalatanirraa kaasee sadarkaalee Gadaa seenanii akkuma gudachaa deemaniin dalagaa garagaraarratti dirqama polotikaafiis qophaawan. Boorana, Gujiifi Arsii keessatti ammoo, isa jahaffaadha. Sirn kun haala Oromoonni tokkummaan isaanii laaffate kan itti roorrisaa turan Habashaafi Affaar ofirraa deebisuu dadhabe keessatti, seena hawaasaa ilaalerraa, jaarraa 14ffaa keessa biqiluu jalqabee suuta guddatee deeme.
Hawaasa Oromoo bara sirna gadaa keessatti, kun murna lolu ture. Hariiroon ku yeroo dheeraaf hawaasa Oromoo keessatti hojjate. Isaan keessaa garii maqaa dhawuuf: Barri isaa tti dhihaata.
Goso tokko keessa karra hagafaafi quxxusuu nijiraatu. Birmajiin Tuulamaafi Macaa lafa fardi isaa dhaquu dandayu mara deemee qabate.
Boranaafi Gujii keessatti ammoo, yeroon aangoon qabanna tartiibaan waggaa ttifi waggaa tti waan taheef, yeroon itti aangoof ofqopheessan kun waggaa Gadaa jiddutti taha. Raaboma waggaa 33 — 40 6. Eega, hawaasa keessatti Gadoomuuf carraa kan qaban ilmaan kormaa thuu hubanne.
Kuniis akkaata qabeenya dhuufaa turerraa calaqqisa. Akkaataa dinagdeefi polotikaa issaarraa aadaan hawaasa Oromoo keessatti, bara Gadaa dagaagee beekamaa ture.
Hagayya kitaabaa, Abbaa Urjii tiin: Lachuu saanii bara tti Gadaarra turan. Jireenyi dhala namaa walitti hidhaataadha. Tahullee sadarkaaleen Gadaa jiruuf jireenya dhala Oromoo mara calaqqisiisa. Hawaasa keessatti paartiileen uumamtu turan jechuudha.